Qarax khasaaro geystay oo ka dhacay Muqdisho – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Qaraxaan oo ahaa miinada nooca dhulka lagu aaso ah ayaa waxaa uu ka dhacay Wadada aada degmada deeyniile ee ka leexata Aargada laga galo degmadaas,waxaana la sheegay in uu qabsaday qaraxa gaari ay wateen dad Shacab ah.
Goobjoogayaal ayaa u sheegay Mareeg Online in Gaariga uu qaraxa qabsaday xilli uu marayay agagarka Isbitaalka guutaale oo ku yaalla Wadada Jaayga ah ee Aada Xarunta degmada Deeyniile,isla markaan aay ku dhaawacmeen saddex ruux oo mid ka mid ah uu yahahay Dhaqtar.
Gaariga Miinada la qaraxday oo noociisu yahay Surf Tri Rz ayaa waxaa sidoo kale soo gaaray burbur xoogan,iyada oo dadkii qaraxaasi miino ku dhaawacmay la geeyey mid ka mid ah Isbitaalada Magalada Muqdisho.
Ciidamo ka tirsan kuwa Booliska Soomaaliya ayaa waxaa ay gaareen Goobta uu qaraxa ka dhacay,iyaga oo xiray Wadada mudo daqiiqado ah wallow markii dambe ay dib u fureen.
Majirto cid weli sheegatay Mas’uuliyadda qaraxaasi miino ee qabsaday Gaari ay saarnaayeen dad Shacba ah oo ay waxyeelo kasoo gaartay,waxaana qaraxaasi uu qeyb ka yahay falalka amnidarro ee ka dhaca Magaalada Muqdisho.
Wafdi ka socda Golaha Shacabka oo ku wajahan Garoowe
Howlgal hub lagu soo qabtay oo laga sameeyay Duleedka Muqdisho